Arsenal oo guul raaxa leh kaga gaartay kooxda FK Qarabag kulankooda labaad heerka group-yada ee koobka Europe League – Gool FM
Arsenal oo guul raaxa leh kaga gaartay kooxda FK Qarabag kulankooda labaad heerka group-yada ee koobka Europe League
(Europe League) 04 Okt 2018. kooxaha Arsenal iyo FK Qarabag ayaa ciyaar aad u xiiso badan kuwada ciyaaray kulankooda labaad ee heerka group-yada ee koobka Europe League.
Kulankan ayay labada kooxood ka sameeyeen qaab ciyaareed cajiib ah waxaa qeybta hore lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaamineysay kooxda Gunners oo kulnka marti ku ahayd garoonka FK Qarabag.
Goolka kooxda Arsenal ayaa yimid daqiiqadii 4-aad ee bilawga ciyaarta waxaana u dhliyay Sokratis Papastathopoulos, oo caawin ka helay Nacho Monreal, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay kooxda Arsenal ayaa ciyaarta dib ugu soo laabatay si xamaasadeysan, waxayna u muuqdeen kooxda inta badan iska maamuleesay ciyaarta.
Daqiiqadii 53-aad ee qeybta labaad ciyaarta xidiga Emile Smith-Rowe ayaa hogaanka u sii dheereeyay kooxda Arsenal kadib markii uu u dhaliyay goolka kalsoonida, waxaana goolkan ka caawiyay Alex Iwobi ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 2-0 ay ku hogaamineesay kooxda reer London.
Markale daqiiqadii 80-aad ee ku dhawaad dhamaadka ciyaarta Matteo Guendouzi ayaa u dhaliyay Arenal goolka 3-aad ee ciyaarta wuxuuna si toos ah u niyad jabiyay kooxda FK Qarabag, kadib markii uu isna goolkan uu ka caawiyay Alexandre Lacazette, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 3-0.
Ugu dambeyn kooxda FK Qarabag oo kulankan marti loogu ahaa ayaa loogu awood sheegtay 3-0, xili ay ka dhigan tahay guushii labaad ay kooxda Arsenal ka gaartay koobka Europe League ee xili ciyaareedkan.